NAIROBI ( GO) - Madaxa cusub ee hay’adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa lugaha u galiyey wadanka Kenya khilaafka u dhexeeya wadamada Khlaiijka, sidaas waxaa lagu qorey jariidada Daily Nation cadadkeeda soo baxay maalintii Axada.
Bishii la soo dhaafey markii agaasimihii hore ee Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin loo magacaabey ku xigeenka hay’ada sirdoonka Soomaaliya “NISA” ayaa diidmo ka muujiyey hay'adaha sirdoonka ee afarta wadan ee xayiraada ku soo rogey Qadar iyo Kenya.
Sabata arinkaan looga hadlayo labada dhalasho ayaa ah in Yasin uu ka tanaasulo midda dalka Kenya, sidaas waxaa Daily Nation u sheegey sarkaal kamid ah sirdoonka dalkaas.
Yasin ayaa xogta waxay sheegeysaa inta uu ahaa Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya isku dayey inuu xiriir dhow la sameysto saraakiisha hay'adaha sirdoonka gobolka gaar ahaan kuwa ciidamada ka joogaan dalka Soomaaliya waxayna isku daygiisa ka muujiyeen shaki.
Shir maamulada Soomaaliya ku yeesheen bishaan Sept 4-8,2018 magaalada Kismaayo ayaa qoraal ay kasoo saareen waxay walaac ka muujiyeen sida hay'ada sirdoonka shaqadeeda loo siyaasadeeyey iyagoo sidoo kale wel wel ka muuiyey in kaydka sirta qaranka gacanta u galo dowlado shisheeye.